Free service online. Ukubalwa ophahleni ophahleni gable
Ukubalwa of ezintweni zokwakha uphahla for the ophahleni gable
Cacisa izilinganiso ophahleni
X2 - ububanzi izindonga side eduze ophahleni!
Phakathi amabhodi lathing R
Ukubalwa kwe-gable uphahla
Y2 - ukuphakama eyengeziwe
Lolu hlelo kuhloswe ngalo ukuba ukubala ezintweni zokwakha uphahla: Inani impahla sheet (ondulin, Nulin, slate noma metal), impahla underlay (asphalt, uphahla impahla), inani amabhodi lathing kanye semishayweni.
Ungase futhi ukubala ezinye izilinganiso ewusizo uphahla.
Lolu hlelo lusebenza ku izindlela ezimbili: a roof elula gable nophahla kanye ezimbili side gables (side uphahla), thayipha 1 bese ubhala 2.
Ukuqapha! Uma une kophahla omunye side gable, bese sebenzisa ukubala uhlobo lokuqala 1, bese uthayipha 2. Futhi kakade kusukela idatha wathola sinquma inani zokwakha: trusses, amabhodi Batten, underlay futhi ishidi materials.
Kungenjalo, ukubala kungase kube iphutha. Phela, hlelo ivumela ukusikeka ophahleni main ngaphansi gables kophahla side.
The calculation uzobona izinombolo ambalwa: ubukhulu noma umthamo impahla ukwakhiwa kwesigamu ophahleni futhi kubakaki - ngosayizi ogcwele noma ivolumu.
In kokubala ophahleni extra - a usayizi ogcwele futhi zisakazeka, futhi kubakaki izinombolo ezimbili: ubukhulu kanye kwenkululeko eyodwa noma ezimbili ngaphezulu uphahla.
Ukuqapha In the sibalo ishidi wokufulela impahla, khumbula ukuthi uhlelo uthola ophahleni square.
Ngokwesibonelo, 2.8 kuya 7.7 iphindaphindwe uchungechunge amashidi zilandelana. Uma ukwakhiwa Okuyınqo ubeke imigqa 3.
Ukuze izibalo ezinembile inani amaphepha yophahla ukunciphisa ukuphakama sheet kufanele ibalwe ukuthola inombolo lonke emigqeni.
Ungakhohlwa ukusetha inani lifiphale kahle.
Uma kuhlaziywa umthamo impahla the main ophahleni emishayweni, ngaphansi kombuso ka uhlobo 2, uhlelo akubandakanyi side ukusika-out ngaphansi pediment. Lokhu kungenxa ezinye nobunzima ukuqaliswa kohlelo.
Mhlawumbe ngizobuya anqume esikhathini esizayo.
Nokho, le ngokweqile impahla imishayo cishe zinyamalale noma ukwenza ezinye izinguquko izibalo zabo.
Kuzophinde kube uhlelo ehlukile ezihlakaniphile more ekubalweni ishidi ezintweni zokwakha uphahla.
Futhi ungakhohlwa ukuthenga izinto zokwakha kumele kube nabathile wekhasi for imfucuza.